के तपाँईको लिं'गका कारण पार्टनर सन्तुष्ट छैन ? १५ दिनमा ३ इन्च घरमै यसरी बढाउन सकिन्छ
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » यौन जिज्ञासा र समाधान » के तपाँईको लिं’गका कारण पार्टनर सन्तुष्ट छैन ? १५ दिनमा ३ इन्च घरमै यसरी बढाउन सकिन्छ
काठमाडौं । अहिले मंसीर महिना चलिरहेको छ । यो समयमा धेरै जनाको नयाँ विवाह हुने गर्दछ । विवाहसँगै धेरै चुनौतीहरु अगाडी खडा हुन्छन् । प्रेम विवाह गर्नेहरुका लागि सामान्य भए पनि मागी विवाह गर्नेहरुका लागि भने विवाह एक फरक संसार हो । जहाँ तपाईले हरके कुरा नयाँ मात्रै देख्नुहुन्छ । सामान्यतया प्रेम सम्बन्धमा रहनेहरु विवाहपुर्व नै यौ’नसम्बन्धमा रहेका हुन्छन् । उनीहरु शाररीक मात्रै नभई मानसिक रुपमा पनि यौ’न सम्बन्धका लागि तयार हुन्छन् ।
यो सँगै केटाहरुको मनमा धेरै प्रश्नहरु आउँन सक्छन् । विवाह वा त्यो भन्दा पहिले सम्बन्धमा रहँदा लिं’गको विषयलाई लिएर धेरैमा एक खालको संकुचन हुन्छ । यो व्यवहारिक नभए पनि मान्छेहरु त्यस्तो सोच्छन् । मानिसहरु अनुसार सबैंको लिं’गको आकार फरकफरक हुन्छ । यौ’न सम्बन्धमा रहँदा लिं’गको आकारले कुनै फरक नपार्ने धेरैको बुझाई रहेको छ । तर पनि कतिपयको रोजाई मोटो र लामो लिं’ग हुनसक्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि आज हामीले एक सरल घरेलु तरिका लिएर आएका छौं ।
भर्खर जन्मेको शिशुको शरीरमा तपाईले गाई वा भैसीको घिउले वा तेल नै लगाएर भए पनि मालिस गरेको देख्नु भएको होला । यसले हाम्रो नसाहरुमा एक विशेष खालको प्रभाव पार्दछ । यस्तै लिं’ग बढाउनका लागि पनि थोरै घिउ लिएर हरेक दिन राती सुत्नु भन्दा पहिले कम्तीमा १५ मिनेट मालिस गर्ने हो भने लिं’गको आकार ठुलो हुन जान्छ । घिउले मालिस गर्नुभन्दा पहिले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने घिउलाई राम्रोसँग उमाल्नुपर्छ । उमालेपछि सेलाउन दिनुपर्छ । भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
सेलाइसक्यो भने १० देखि १५ ग्राम घिउलाई पहिले हातमा लगाउने अनी विस्तारै लिं’गको वरीपरी, लिं’गमा राम्ररी दुई हप्ता लगातार मालिस गर्नुपर्छ । मालिस गर्दा तपाईको लिं’ग खडा भएको हुनुपर्छ । अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो अवधिभर न त ह’स्तमै’थुन गर्न मिल्छ न यौ’न सम्बन्ध नै राख्न मिल्छ । तपाईले लगातार १५ दिन यसरी नै घिउ मालिस गर्नुभयो अनी ह’स्तमै’थुन र यौ’नसम्बन्ध राख्नुभएन भने फरक आफैं देख्न सक्नुहुनेछ । घिउ लगाएपछि तपाईले धुनु हुँदैन, यसलाई नरम कपडाले पुछ्नुपर्छ ।
मान्छेहरु निलो चलचित्रमा देखाइएकोजस्तो लिं’ग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन । तर सत्य के हो भने भुगोल अनुसार मानिसहरुको लिं’गको आकार पनि ठुलो हुन्छ । पछिल्लो अध्यन अनुसार अफ्रिकी मुलका मानिसहरुको लिं’ग सबैभन्दा ठुलो हुन्छ । अन्य देशहरुका मानिसहरुको लिं’गको आकार सामान्य हुन्छ । हावापानी, खानपान लगायतका कुराहरुले पनि यसको आकारमा प्रभाव पार्न सक्छ । तपाँईले लि’गंको आकार बढाउन, युवतीहरुले स्त’न वा पु’ठ्ठा बढाउनका लागि कुनै पनि खालको औषधि से’वन गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन । तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ ।